China Hyperbolic aluminium veneer factory နှင့် supply များ Jixiang
Hyperbolic aluminium veneer သည်ကောင်းမွန်သောအသွင်အပြင်ကိုပြသသည်။ ၎င်းသည်ကိုယ်ပိုင်အဆောက်အအုံများကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ ဆောက်လုပ်ရေးပါတီ၏ကိုယ်ပိုင်ဆောက်လုပ်ရေးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များအရဒီဇိုင်းနှင့်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ နှစ်ထပ်အကွေးပုံစံလူမီနီယံအပြားသည်ရေစိုခံနှင့်အတွင်းခံဖွဲ့စည်းပုံကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီးရေစိုခံနိုင်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်သည်။ အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုပိုမိုမြင့်မားစေရန်အတွက်၎င်းကို hyperbolic aluminium veneer ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဆေးသုတ်။ အရောင်အမျိုးမျိုးကိုဆေးဖြန်းနိုင်သည်။ hyperbolic အလူမီနီယံ veneer ထုတ်လုပ်မှုသည်ပိုမိုခက်ခဲသည်။ စက်၏တိကျမှုနှင့်နည်းပညာလုပ်သားများ၏လည်ပတ်မှုလိုအပ်ချက်များမှာအတော်အတန်မြင့်မားသောကြောင့် hyperbolic aluminium veneer သည်နည်းပညာဆိုင်ရာခိုင်မာမှုရှိသည်။ မာကျောမှု၊ မာကျောမှု၊ မြင့်မားမှု၊ မီးဘေးနှင့်အစိုဓာတ်ထိန်းနိုင်ခြင်း၊ အဆင်ပြေစွာတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊
၎င်း၏ထူးခြားသော arc shape shape သည်ကွေးသောမျက်နှာပြင်အဆောက်အအုံများအတွက်အသုံးပြုသည်။ သမားရိုးကျ aluminium veneer သည်အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အပြင်ပန်းနံရံအလှဆင်ခြင်း၏နံရံများသည်နံရံမှအချို့သော arc curves များသို့သွားသောကြောင့်၎င်းသည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်။ ပြောင်းလဲနိုင်သောအနုပညာပတ်ဝန်းကျင်ကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။
၁။ ထူးကဲသောပုံသဏ္,ာန်၊ ကွေးသောမျက်နှာပြင်၏လှပမှုကိုပြသခြင်း၊
2. အထူ, ပုံသဏ္andာန်နှင့်မျက်နှာပြင်အပေါ်ယံပိုင်းစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်;
၃။ အရောင်၊ သစ်သား၊ ကျောက်စရစ်များကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရရှိနိုင်သည်။
4. မိမိကိုယ်ကိုသန့်ရှင်းစွာသန့်ရှင်းစွာထားရန်၊ စွန်းထင်းရန်မလွယ်ကူ၊
၅။ လူသားထုတည်ဆောက်ပုံဒီဇိုင်း၊ အဆင်ပြေစွာတင်ခြင်း၊ ချခြင်း၊ လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ဆောက်လုပ်ခြင်း၊
၆။ ထူးခြားသောအရည်အသွေး၊ တာရှည်ခံခြင်း၊
၇။ ပြင်ပမျက်နှာပြင်သည်အပြင်အဆင်ရှိပြီးတောက်ပြောင်နေပြီး ၀ တ်ဆင်နိုင်သည့်အပြင်ခြစ်ရာများကိုလည်းခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
၈။ ၎င်းကို ပြန်လည်အသုံးပြု၍ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပတ် ၀ န်းကျင်ကာကွယ်ရေးအတွက်အကျိုးရှိသည်။
၎င်းကိုဆေးရုံများ၊ မြေအောက်ရထားများ၊ ဘူတာရုံများ၊ လေဆိပ်များ၊ ပြတိုက်များ၊ ကွန်ဖရင့်ခန်းမများ၊ အဆင့်မြင့်ဟိုတယ် obb ည့်ခန်းများစသည်ဖြင့်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။
ရှေ့သို့ 4D တုပသစ်သားစပါးအလူမီနီယံ veneer
နောက်တစ်ခု: ပibိဇီဝဆေးနှင့် antistatic လူမီနီယံပလပ်စတစ်ပြား